လူသားအားလုံးအတွက်: 2011, January လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း
သိသမျှ လေး တွေ ခံစားချက်လေးတွေကို မျှဝေနိုင် သလောက် ဝေမျှရုံလေး သက်သက်နဲ့ ဒီနေရာလေးကို ဖန်တီးမိပါသည်။ ခင်မင်ခြင်းများစွာဖြင့်.....မိုးယံ
ဖတ်ကြည့်ရဦးမယ် နိရဉ္စရာ တိုင်းမ် အွန်လိုင်း Aljazeera Magazine မြန်မာတိုင်းမ် The Star အင်တာနက် ဂျာနယ် New Light of Myanmar လျှပ်တစ်ပြက် ဂျာနယ် ပေဖူးလွှာ nwestraitstimes ရွှေအမြူတေ Weekly eleven ဈေးကွက် ဂျာနယ် Perfect Magazine မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ Daily Express ကြေးမုံ သတင်းစာ မြန်မာသတင်း ဘန်ကောက်ပို့စ် သတင်းစာ AP Asscociated Press လမ်းသစ်ဂျာနယ် ခေတ်လူငယ်7days News
သီချင်း၊ရေဒီယို၊ဗွီဒီယို၊ မြန်မာ ဗွီဒီယို ရင်ခုန်သံ FM အဖြူရောင် သံစဉ် မြန်မာ အမ်ပီသရီး ဘိုဘို ကာတွန်းများ မြန်မာ VCD Burmeseclassic
ဗွီစီဒီ သီချင်း ငါပြန်လာပြီ-ဂျောက်ဂျက် ငါ့ညီ-ဂျောက်ဂျက် မျှော်လင့်ရင်းဝေး-ချမ်းချမ်း မေ့တော့မမေ့သေးဘူး-ချမ်းချမ်း နေပါစေ-ချမ်းချမ်း အားလုံးသောအချစ်တွေ နားလည်နေ-ချမ်းချမ်း အချစ်ဒဏ်-ချမ်းချမ်း အချစ်စစ်စစ်နဲ့တွေ့လား-ချမ်းချမ်း မင်းကြောင့်ရူး-ချမ်းချမ်း ဘယ်လိုလဲ-ချမ်းချမ်း တစ်ခါတည်းချစ်ချင်လို့ပါ-ချမ်းချမ်း တစ်ကယ်ဆိုရင်...အချစ်ပဲလိုတယ်-ချမ်းချမ်း တစ်ကယ်ဆို အချစ်ပဲလိုတယ်-ချမ်းချမ်း ချမ်းချမ်း ရှိုး ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း-ချမ်းချမ်း မေ့လို့မရနိုင်ဘူး မြတ်သဲအိမ် ပျော်စရာ အချစ်နေ့များ နွေးနွေးကို တောင့်တခြင်း ထူးမော် ကောင်မလေး သည်စကိုင်း အလွမ်းတွေရှိဆဲပါ လပြည့် အလွမ်းတွေမရှိသောနေ့တွေဆီ ဒီရေတိုး အလယ်အလတ်အတိုင်းအတာ ၀တီ သတိရတဲ့အခါ အားဇင် လွမ်းလေဦးမှာ ဖိုးကာ မုန်းမသွားခင် ဂျူလိုင် နတ်သမီး စောအယ် ဒဏ္ဍာရီထဲကအိပ်မက်များ ဒီယွန်းလေး ဒီဇင်ဘာရင်ကွဲနာ စွဲလန်းဖြူ ၀င်လာမစဲတသဲသဲ ဟဲလေး မျှော်လင့်ချက် ဆွေဟိန်း အနွံတာခံချစ်သူ ခိုင်ရွှေဝါ အချစ်သင့်သူ ဖြူဖြူကျော်သိန်း လွမ်းလို့ပြန်ခဲပါ နော်ဒေါရစ် လွင့်ကြွေအိပ်မက်များ မိုးထက်ပိုင် ရင်ကွဲငှက်၏တမ်းချမ်း ညီလင်းထွန်း မညီမျှသောအချစ် လျှံဟိန်း မခံနိုင်တော့ပါ မွန်မွန်ကြည်ဖြူ နင်ထွက်သွားတော့ ချမ်းချမ်း ဒဏ္ဍာရီထဲကချစ်သူ ထက်ထက်စုလှိုင် တို့နှစ်ဦးကြား အယ်လ်လွန်းဝါ ပျော်ရင်ပြီးတာပဲ ဟဲလေး+အစ္စဏီ+ဒီယံ ခေတ်ကာလသားသမီးများ ဟဲလေး အင်တာဗျူး ဟဲလေး+ဖိုးပြည့် မိသဝေထိုး ဟဲလေး+ချိန်ချိန်း မင်းကိုငါချစ်တယ် ဟဲလေး+ဒီယံ ဒဏ်ရာမဲ့ အနာ ဟဲလေး နှုတ်ဆက်ညလေး ဟဲလေး တစ်သက်စာ တစ်မျက်နှာ ဟဲလေး+ချမ်းချမ်း စက္ကထရီ ဟဲလေး ခိုနားရာ ဟဲလေး ၀ါရင့်သမ္ဘာရင့်2MTW ဟဲလေး+Wai လျှံ ၀ါရင့်သမ္ဘာရင့်2ဟဲလေး ၀ါရင့်သမ္ဘာရင့် 1 ဟဲလေး နေရာတိုင်းမှာသူ့မျက်နှာ-စိုးပိုင် မင်းတစ်ယောက်တော့ အသည်းကွဲရလိမ့်မယ်-စိုးပိုင် ချစ်စိတ်တဝေေ၀-စိုးပိုင် မျက်စိလည်သွားပြီကွယ်-စိုးပိုင် စိမ်းတယ်လို့မှတ်မှာလား-စိုးပိုင် လမင်းတစ်ရာသာသည့်နှုန်း-စိုးပိုင် ရွှေတံခါးကြီးဖွင့်ပါဦး-စိုးပိုင် အမုန်းသူဌေးမလေး - စိုးပိုင် ဝေးဝေးပြေးပြေး တွေးတွေးကြင်နာ- စိုးပိုင် လှတစ်မျက်နှာ - စိုးပိုင် မောင်မောင်ကတော့ တစ်ယောက်တည်း- စိုးပိုင် စိတ် - စိုးပိုင် မုန်းဆက်ဆက်မရွယ် မောင်ကြီးခေါ်ရာ အတူတွဲကာ အညာပုဂံ ဘုရားဖူး အကြင်နာလှေ သူငယ်ချင်းတို့ မင်္ဂလာပွဲ သက်ဆုံးတိုင် မိတ်ဆက် မင်္ဂလာတေး ပန်းတံတား လေလွင့်ခြင်း အယ်ဒီကျော် မျှော်လင့်ခွင့် - ချန်းခင်+ထက်ထက် ပျော်ရွှင်ပါစေကမ္ဘာကြီး - အဖွဲ့ အိုအေစစ် - သော်ဒီ အားလုံးထားခဲ့ပါတယ် ဇွန်မေအောင် အားလုံးအိုကေ - နဒီ ရှိတ်စပီးယားမရေးတဲ့ ဇတ်လမ်း ထက်ထက် ရင်ခုန်သံဖြည့်ဖက် သော်ဒီ+ဇွန်မေအောင် ရင်ခုန်သံတူရင် အဖွဲ့ မင်းရဲ့အနားမှာ - ချန်းခင် မြင်နိုင်မလား ဖြိုးကျော်ထိုက် နှုတ်ဆက်စကား ဖြိုးကျော်ထိုက်+နဒီ6အေသင်ချိုဆွေ 8 Ladies4သဇင် 8 Ladies3သင်ဇာ့ဝင့်ကျော် 8 ladies2ရတနာမိုင် 8 Ladies 1 ရတနာမိုင် 8 Ladies ပေးဆပ်ရင်းနဲ့ချစ်နေမယ် - ခွန်းဆင့်နေခြည် တော်ပါ - ခွန်းဆင့်နေခြည် ၊ ရသ ခေါင်းငုံ့ထားပါ့မယ် - ခွန်းဆင့်နေခြည် ၊ ရသ အိမ်မက်တံတား - ဟဲလေး၊ ခွန်းဆင့်နေခြည် လက်ဆောင် - ခွန်းဆင့်နေခြည် ၊ ယုန်လေး မင်းနဲ့ဖြစ်ပါ့မလား - ခွန်းဆင့်နေခြည် မင်းဘေးကဖယ် - ခွန်းဆင့်နေခြည် ဖုန်းတစ္ဆေ - ခွန်းဆင့်နေခြည် ပုံသေနည်း - ခွန်းဆင့်နေခြည် ထွက်မသွားနဲ့ - ခွန်းဆင့်နေခြည် ငရဲကြီးတတ်တယ်နော် - ခွန်းဆင့်နေခြည် ခွင့်ပြုတယ် - ခွန်းဆင့်နေခြည် ချစ်နေတာကြည့် - ခွန်းဆင့်နေခြည် ကလိမ်ဆင်လေး - ခွန်းဆင့်နေခြည် ၂၁ရာစုချစ်သမျှကို - ခွန်းဆင့်နေခြည် ၀ဋ်လည်မယ် - ခွန်းဆင့်နေခြည် 8 Ladies Show - ရတနာမိုင် မျှော်လင့်နေသူ ဇေဇေ+မိုးဝဿန် ကျေနပ်တော့ ဂျွန်ဂို + သဇင်သင်း အတူဆုံချင်ပြီ နီတာ+ရတနာမိုင် အချစ်ရှိနေသမျှ - ဖိုးကာ + ကာကာ အချစ်များနဲ့အတူ - ထွဋ်ခေါင်ဦး+သက်မှူးခင် အချစ်ကွန်ယက် - အောင်လ + လပြည့်ကဗျာ ရင်ခုန်သံအမြန်နှုန်း - အောင်သီဟ+အေးမြတ်သူ မင်းထင်လို့ပါ - ရဲလေး+ပဲပဲ မငယ်တော့ဘူး - ဖြိုးကြီး+ကုဋာခင် ဘယ်အချိန်ပြန်လာမလဲ ပြန်လာပါ - ပေါက်စီ+နေနေ ချန်မထားခဲ့ပါနဲ့ အေးဆေးပဲ အကန့်အသတ်မရှိ အကန့်အသတ် မရှိ MTV လူသားတိုင်း မွန်မြတ်ခြင်း မဟုတ်တော့ဘူး မလှည့်စားနဲ့ MTV မလှည့်စားနဲ့ ဘယ်တော့မှတို့မဝေးဘူး MTV ဘယ်တော့မှ တို့မဝေးဘူး ပုံသွင်းပစ်မယ် နိဒါန်း ကြိုး The World ပြန်ဆုံမယ့် တစ်နေ့ ပေးဆပ်အချစ် အဝေးဆုံး အရင်တိုင်းထက် အချစ်ရေစက် နှလုံးသား အလှဆင်တေး လမ်းပြဦး မျက်ရည်လက်နက် မပေါင်းစပ်နိုင်တဲ့ အချစ် မင်းအတွက် အမြဲအဆင်သင့် မင်းမရှိတဲ့နေ့ မီးနို ညရည်းစား ချမ်းချမ်း အေးစေသောငြိမ်း သည်းဦး သစ္စာ ရင့်ကျက်ခြင်းမှာ မလာမယ့်လမ်း ပုံပြင်ဆန်နေသလား တရားအိမ် ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်း စိတ္တဇ ငှက်ကလေး တစ်ကောင် ကန်ရေပြင်ည မှော်ဆရာ ဂိုး ဘောလုံး ဘုရင်များ အယ်စတုံလေး ပွဲသိမ်း ဂိုး ပိုက်ဘော နံပါတ် ၀မ်း ဒို့ ပထမ ထွန်းသစ်စ အာရှကျား ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့ ကိုကို ကိုကိုသွင်းတဲ့ နောက်တစ်ဂိုး မေတ္တာကမ္ဘာများဖြင့် မခြားလိုတယ် ဆောင်းရယ်နှင်းရယ် ကိုယ့်ချစ်သူရယ် အလွမ်းနွေကို စမ်းရေထဲမှာမျှောလိုက်မည် အချိန်ရမှ နားထောင်ပါ အချစ်များစွာဖြင့်သာ လွမ်းစေသောမောင် မုန်းရစ်လေဦး ဘ၀ခြင်း ဆုံတွေ့ပါရစေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းက ငွေလမင်း ဆယ်မိုးဆယ်နွေ နှင်းပျောက်တဲ့နွေ မျက်နှာဖုံးများ ယံယံ ရိုးရိုးလေးနေပါ ဒီရိုင်း ထာဝရမင်းအတွက် The Sky နေခဲ့ပါ့မယ် စွဲလန်းဖြူ လက်ဆောင်မွန် နေလ အထီးကျန်ည သက်မှူးထိုက် ငေးကြည့်ရုံဘ၀ Waiလျှံ၊ှဆီဇာ မညာပါနဲ့ မေသော်တာ အချစ်နဲ့အမုန်း ညီမြတ်သူ၊အိမ့်ချစ် နှုတ်ဆက်သီချင်း Dယံ မပြောင်းလဲမယ့် အရိပ် ခွင့်လွှတ်ခြင်းသို့ စွမ်းဆောင် အချစ်မှတစ်ပါးမရှိပြီ ချိန်ချိန်း အားလုံးထက်မင်း လမင်းမိုမို ကြယ်ကြွေကောင်းကင် စိုးဇော်ဝိုင် မင်းနဲ့ နီးပါရစေ Honey Dolls ကွာဝေးမှု ဒီရိုင်း ညနေလေပြေ မီးအို မုန်းဖို့လွယ်တယ် မေ့ဖို့ခက်တယ် သြရသ အလွမ်းဝင်္ကပါ အစ္စဏီ အချစ်ကို အလိုလိုသိခဲ့ပြီ N ကိုင်ရာ City FM 8th Anniversary ဆုပေးပွဲ ဂီတာအစ ဘယ်သူက ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း + Jenny ရင်ထဲကလာတဲ့သီချင်း - ဖိုးကာ တစ်ဖက်သတ် - နောနော် အချစ်ရဲ့ သီချင်းသံ - ချမ်းချမ်း ကြယ်တွေကို အိမ်မက်ခြင်း - ဇော်ဝင်းထွဋ် အဖြူနဲ့အမည်း - ထွန်းအိန္ဒြာဗို+ဘရိတ်ကီ ညလူပျို - မေဆွိ ဂီတာကြိုးလေးပြတ်သွားပြီ - အနဂ္ဂ + သံသာဝင်း သီချင်းမရှိတဲ့ ဂီတာ Lဆိုင်းဇီ ဂီတာ ရှိတ် ဟဲလေး+ရတနာမိုင် အချစ်နဲ့ ဂစ်တာ ရေဗက္က၀င်း www.youtube.com/laymoe
ရောက်တတ်ရာရာ မြန်မာပြည်ဖွား ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့(ဆွီဒင်) myanmartraining Hot Myanmar ဖတ်မိတာ မကြာသေး ခရစ်ယာန်တရားတော်များ ဆက်ထုံးများ မမေ့နိုင်သေးတဲ့ အဆိုတော် အဓိပတိလမ်းပေါ်က ရဟန်းတစ်ပါး အစ္စလာမ့် ရောင်ခြည် ပြည်ထောင်စုကို ဒို့ချစ်သည် မြန်မာငွေကြေး ဈေးကွက် သတ္တမ နည်းပညာရပ်ဝန်း
လာအိုနိုင်ငံမှာ မူးယစ်ဆေး စံချိန်တင်ဖမ်းမိ
တည် ငြိမ် အေး - ကိုဆိုစီ
Shwe Myanmar Blog
*Speak from My Heart*
မြန်မာ မီးဖိုဆောင် အတွက် ဈေးသက်သာ ချက်စရာ ရတဲ့ ဆိုင်
မြန်မာပြည်မှ ဂြိုလ်တုတစ်စင်းလွှတ်တင်နိုင်ရန် Sing Tel ကူညီမည်
“ အက္ခရာ ကမ္ဘာ ”
အိပ်ဆေးမစားဘဲ အိပ်ပျော်စေနိုင်မည့် သဘာဝနည်းလမ်းများ
ပိုပြီး ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် (၇)ရက် သင်တန်း – ဒုတိယအကြိမ်
Myhome16.com အား ရပ်နားခြင်း
Latest Activity on မီးအိမ်ရှင်များ
Diary In The Life
ဒီဇင်ဘာ (၁၄) ရက်တိုင်းသည် မြန်မာသူငယ်ချင်းများနေ့ ဖြစ်သည်
Facebook မှ သတင်းများ
အိုး- - ထူးခြား ဆန်းပြား
2011, January လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း
2011, January လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း ....
၁။ တနင်္ဂနွေသားသမီးများ အတွက်
ဒီလတွင်းမှာ လိုအင်ဆန္ဒပြည့်ဝ လာမည်။ ကံကောင်းမှုများစွာ ကြုံတွေ့ရမည်။
အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများအဆင်ပြေနေသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ပြောင်းရွှေ့မှုများ
နေရာထိုင်ခင်း ပြောင်းရွှေ့မှုများရှိပါ သည်။ အဆင်ပြေ ပါသည်။
ဒီလအတွင်းမှာ အထက်လူကြီးများနှင့် စကားပြောဆိုမှု အဆင်ပြေပါသည်။
ယခုလအတွင်း ငွေကြေးများ ပုံမှန်လေးသာ အဆင်ပြေမည်။ ရသလောက်ကုန်ကျမှုများ ရှိပါသည်။ ရုတ်တစ်ရက် အပိုသုံးနေရသောအချိန်လေးဖြစ်ပါသည်။
ဒီလအတွင်းမှာ ခရီးယာယီကိစ္စများ သွားရမည်။ ပျော်ရွှင်သော ခရီးကိစ္စများရုတ်တစ်ရက် ထွက်ရမည်။ပညာရေးမှာ ကံကောင်းနေသော အချိန်လေးပါ။
ဒီလအတွင်း အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းနေပါသည်။ မိမိ ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေနေပါသည်။အဆင်မပြေသော်လည်း ပြန်လည် အဆင်ပြေလာမည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ စကားများနေရမဲ့အချိန်လေးပါ။
ဒီလအတွက် ကျန်းမာရေးမှာ အအေးမိခြင်း ဗိ်ုက်အောင့်ခြင်း ဖြစ်မည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် အိမ်ဘုရားတွင် သောက်တော်ရေ ၈ ခွက်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် ကပ်လှူ၍ ဆုတောင်း လိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်း ။ ။3553
၂။ တနင်္လာ သားသမီးများ အတွက်
ဒီလအတွင်း မိမိ၏ စိတ်ကူးများ ရည်မှန်းချက်များ ပုံမှန်လေးအဆင်ပြေ နေသောအချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်ကိစ္စများစိတ်ပူစရာ မရှိပါ အဆင်ပြေနေမည်။
စီးပွားရေး ငွေကြေးကိစ္စများ ပုံမှန်လေး အဆင်ပြေလည်ပတ်နေမည်။ ငွေကြေးများ စုမိသောအချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။ ငွေကြေးကိစ္စများ ဂရုစိုက်ပါ။ ( ပျောက်ရှမှု ရှိပါသည်။ )
ခရီးယာယီများ သွားလာမှု များနေမည်။
မိမိ မိသားစုအတွင်း နေရာထိုင်ခင်း ပြောင်းရွှေ့မှုများ ဖြစ်ပေါ်မည်။ပညာရေး ကြီုးစားရမဲ့ အချိန်လေးပါ။
အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေနေမည်။ပြသာနာဖြစ်နေသော်လည်း ပြန်လည် အဆင်ပြေလာမည်။
အိမ်ထောင်ရေးမှာ ကြည်နူးနေမဲ့ အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ ခါးနာ ၊ ဒူးနာ ၊ အကြောတက်ခြင်း ဖြစ်မည်။
ယတြာ = မိမိ နေအိမ်ဘုရားတွင် ငွေ 15 ကျပ်ကို မိမိရဲ့ မွေးနေ့ တနင်္လာနေ့၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင်ကလေးတစ်ယောက်အား လှူ၍ လိုရာဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလ အတွက် ကံကောင်း အကျိုးပေး သောဂဏန်းများ ။ ။2249
၃။ အင်္ဂါ သားသမီးများ အတွက်
ယခုလအတွင်း လိုရာဆန္ဒများ အဆင်မပြေသေးပါ။ ရည်ရွယ်နေသောစိတ်ကူးများ မအောင်မြင်သေးပါဘူး။ နည်းနည်းတော့ အချိန်ကို စောင့်ရမည်။ အလုပ်အကိုင် ကိစ္စများ အတွက် စိတ်ညစ်နေရမဲ့ အချိန်လေးပါ။
အထက်လူကြီးတွေနဲ့ ပြုလုပ်သော ကိစ္စများတွင် အခက်အခဲ အနည်းငယ် ရှိပါသည်။ ဒီလအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ ဒီလအတွင်း အနည်းငယ်အဆင်ပြေနေမည်။ ငွေကြေးကိစ္စများ အတွက် ကူညီသူ ပေါ်လာမည်။
ခရီးကိစ္စ အဆင်မပြေ သေးပါဘူး။ မသွားတာ ကောင်းပါတယ်။ ပညာရေး မှာ ကြိုးစားနေရမဲ့ နေ့ရက်လေးပါ။ အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေနေမည်။ ခဏ ခွဲခွာရသော အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရမည်။
ဒီလအတွင်း အိမ်ထောင်ရေးမှာ စကားများ နေသော အချိန်လေးပါပဲ။ ကျန်းမာရေးမှာ လက်နာမည် ၊ အစားမှားခြင်း ဖြစ်မည်။( ယခုလအတွင်း အရက်သောက်ခြင်း ရှောင်ပါရန်)
ယတြာ = မိမိ နေအိမ်ဘုရားတွင် လိမ္မော်သီး ၄ လုံးကို မိမိရဲ့ မွေးနေ့အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် ဘုရားတွင်ကပ်လှူ၍ ကံကောင်း လာစေရန်အတွက် ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသော ဂဏန်းများမှာ ။ ။ 133 1
၄။ ဗုဒ္ဓ္ဓဟူး သားသမီးများ အတွက်
ယခုလအတွင်း ရည်မှန်းချက် ရည်ရွှယ်ချက်များကို ကြိုးစား လုပ်ဆောင်သင့်သော အချိန်လေးပါ။ အလုပ်အကိုင် ကိစ္စများနဲ့ ပက်သက်လို့ အဆင်ပြေနေသော အချိန်လေးပါ။အထက်လူကြီးနဲ့ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ဂရုစိုက်၍ ဆောင်ရွှက်လိုက်ပါ။ အဆင်ပြေလာမည်။
ယခုလအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများကတော့ အဆင်ပြေပါသည်။ စမ်တူကိစ္စများ အဆင်ပြေနေမည်။ ငွေဝင်ကိန်း ရှိနေပါသည်။ ငွေးကြေးများ စုမ်ိသော အချိန်လေးပါ။
ခရီးကိစ္စများ သွားလာမှု အဆင်ပြေနေမည်။ မိသားစုအတွင်း အလှူအတန်းများ ဘာသာရေးကိစ္စများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွှက် ရမည်။ အချစ်ရေးမှာ အဆင်မပြေသေးပါ။အိမ်ထောင်ရေးမှာ ပျော်ရွှင်သော နေ့ရက်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိနေမည်။
ယခုလ ကျန်းမာရေးမှာ သွေးအားနည်းခြင်း ၊ စိတ်ပန်းခြင်း ဖြစ်မည်။
ယတြာ = နေအိမ်ဘုရားတွင် သရက်သီး (သို့မဟုတ်)သစ်တော်သီး ၆ လုံးကို ဗုဒ္ဓ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် တင်လှူ၍ ကံကောင်းလာစေရန်အတွက် ဆုတောင်းပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်းများမှာ ။ ။5433
၅။ ကြာသပတေး သားသမီးများ အတွက်
ဒီလအတွင်းမှာ ရည်ရွှယ်သော ကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။ စိတ်ကူးများ မျှော်လင့်ချက်များ အောင်မြင်လာမည်။ အထက်လူကြီးများနဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ပါက ပို၍အဆင်ပြေလာမည်။
ငွေကြေးကိစ္စများ ကံကောင်းနေသော အချိန်လေးပါ။မိမိရဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမည်။ကူညီပေးသူ ပေါ်မည်။ ငွေကြေးများ မရခင်ကကုန်နေသလို ဖြစ်နေမည်။
ငွေဝင်ကိန်းရှိပါသည်။ ရအောင်သာ စုဆောင်းပါ။
ဒီလအတွင်း ပညာရေကိစ္စများ အောင်မြင် အဆင်ပြေပါသည်။
ခရီးကိစ္စများ မသွားတာ ကောင်းပါတယ်။ အဆင်မပြေပါ။ မိတ်ဆွေများမှ ကူညီပေးသူ ပေါ်မည်။ ဒီလအတွင်း အချစ်ရေးမှာ ကံကောင်းပါသည်။ ချစ်သူ အသစ်ရရှိမည်။ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ ဝေးနေရမဲ့ အချိန်လေးပါ။
အခုလ ကျန်းမာရေးမှာ သွားနာမည် ၊ ခြေထောက်နာမည်။
ယတြာ = မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် စံပယ်ပန်း ၉ ပွင့်ကို ကြွေပန်းကန်ထဲထည့်၍ ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် တင်လှူ၍ ကံကောင်းလာစေရန် အတွက်ဆုတောင်းယူပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်းများမှာ ။ ။36 13
၆။ သောကြာသားသမီးများ အတွက်
ဒီလအတွင်းမှာ လိုရာဆန္ဒတွေ အဆင်ပြေ အောင်မြင်လာမဲ့ အချိန်လေးပါ။ ကြိုးစား၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွှက်လိုက်ပါ။ အထက်လူကြီးများနဲ့ စမ်တူ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရမဲ့ ကိစ္စများတွင်ဂရုစိုက်ပါ။ သိပ်အဆင်မပြေပါ။
ငွေကြေးကိစ္စများ စီးပွားရေး ကိစ္စများတွင် ကံကောင်းလာမည်။ ငွေကြေးကိစ္စများ ပြသာနာများ မိမိကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။အဆင်ပြေ ပါသည်။
ဒီလအတွင်း ခရီးကိစ္စများ သွားရမည်။ သွားသင့်ပါသည်။ မိမိ မိသားစု အတွင်းပြသာနာ ကိစ္စများကို ပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွှက်ပေးရမည်။ ပညာရေးမှာ တိုးတက်သော အချိန်လေးပါ။
အချစ်ရေးမှာ ပျော်ရွှင်စရာလေးသော နေ့ရက်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိမည်။ ကံကောင်းမှုတွေ ရှိလာမှာပါ။ အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စများအဆင်ပြေပါသည်။
ဒီလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ မျက်စိအားနည်းခြင်း ၊ အိပ်မပျော်ခြင်းဖြစ်မည်။
ယတြာ = တရားစာအုပ် ၃ အုပ်ကို အသက်ကြီးသူ တစ်ဦးဦး အားသောကြာနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ လှူ၍ ကံကောင်းလာစေရန် အတွက် ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်း ။ ။3508
၇။ စနေသားသမီးများ အတွက်
ဒီလအတွင်းမှာ ရည်ရွှယ်သော ကိစ္စများ အဆင်မပြေသေးပါ။ယခုလအတွင်း ဟိုဟာလုပ်ရမလို ဒိဟာလုပ်ရမလိုနဲ့ အချိန်ကုန်မည်။စိတ်နှစ်ခွ ကိုယ်နှစ်ခွ ဖြစ်နေမည်။ မိသားစု အတွင်း ကျန်းမာရေးညံ့မည်။
အထက်လူကြီးနဲ့ တိုင်ပင်၍ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွှက်လိုက်ပါ။ စီးပွားရေးကိစ္စတွေမှာ ကူညီသူများ ရှိနေသော်လည်း စိတ်ညစ်နေရမည်။ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။ စုမိအောင် ကြိုးစားပါ။
ခရီးကိစ္စများ သွားလာမှုများ အဆင်ပြေပါသည်။ ပညာရေး တိုးတက်လာမည်။ ဆရာကောင်း သမားကောင်းနဲ့ တွေ့ရမည်။ အချစ်ရေးမှာ ဒုတိယ ချစ်သူနဲ့ အဆင်မပြေပါ။ စကားများနေရမည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ စကားများနေပေမဲ့ အဆင်ပြေပါသည်။
အခုလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ ထိမိခိုက်မိခြင်း ၊ သွေးအားနည်းခြင်း ဖြစ်မည်။
ယတြာ = မိမ်ိနေအိမ်ဘုရားတွင် မိမိနှစ်သက်သော မုန့် ၅ မျိုးကို စနေနေ့ နံနက်၉ နာရီ ၄၅ တင်လှူ၍ ကံကောင်းလာစေရန် အတွက် ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသော ကံကောင်းသော ဂဏန်းများ ။ ။2740
၂၀၁၁ နှစ်သစ်လေးမှာ မိမိရဲ့ဘဝလေးများလည်း(၁၁) မီးငြိမ်း၍
စေတနာ မှန်၍ စိတ်ကောင်း ထားတတ် သူတိုင်း ကံကောင်း ကြပါစေ ......
NO. 314 , Block P/B ,
Jin Cheras Taman Cheras ,56100
Ph; 016, 606 1917 , 017, 226 0715
မှက်ချက်။ ဗေဒင်ဟောစတမ်း ကို ဆရာမျိုးဟန်ကို ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် လာရောက် တင်ပေးပါသည်။
မိမိရဲ့ ဆိုက်များတွင် လစဉ် ဟောစတမ်း များ တင်လိုပါက mayhankonew@gmail.com သို့
Posted by နေဇော် လင်း at 5:24 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ပုန်းရေဂျုတီက မနက်၇နာရီခွဲသွားရတာ ကြာသာပတေးမနက်၉နာရီ၄၅ မှာ ဘယ်လိုမှရှာမရတဲ့စံပယ်ပန်းကိုပုန်းပဲ တင်လှူပေးတော့ကွယ်
January 6, 2011 at 6:37 AM
January 7, 2011 at 8:33 AM
Dhamma is ဓမ္မ (15)
Myanmar Tube - Newest videos
ရဲထွန်းဇော် ..အမှတ်တရ နေ့စွဲများ...
CCleaner Professional / Business / Technician 5.25
၁။ ဖာလွန်ုကောင်းကို ဘာ့ကြောင့်စိတ်ဝင်စားသလဲ ?
ဘုရားရှင်၏အံ့ဖွယ်တော် ( ၁၈ ) ပါး
Facebook တွင် game ဆော့နေသောကြောင့် ၁၃လသားကလေး ရေဇ...
သရော်စာရေးဆရာအီကြာကွေးနဲ့ လပြည့်တို့ တွေ့ ဆုံဆွေးေ...
၉၀% သော ယောက်ျားများ/မိန်းမများ
(ပေးစား-၇) လောကအမှိုက် နောက်ဆက်တွဲ
အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ် အိမ်ဖော်မိန်းကလေး တစ်ဦးအား ရေေ...
တရားမဝင် ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချမှုကြောင့် ******၇ဝ ရာခိုင်န...
ကင်မရာနဲ့ ဆိုရင် ခံရပြီသာမှတ်
၂၀၁၀ နိုဘလ် ဆေးသိပ္ပံ
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ခြေလေးချောင်းနှင့် ပါးစပ်နှစ်ပေါ...
မြန်မာနိုင်ငံ အမြွှာမွေးများအသင်း၏ ဒုတိယအကြိမ် တွေ့...
ဘယာနက ဟင်းတခွက် .....
သင်္ဘောသား ဖြစ်ခွင့်အတွက် တက်ရောက်ရမည့်4Tickets သ...
နိုက်ကလပ်မှ မြတ်ဗုဒ္ဓ (၂)
Century Stars CONCERT
Copyright (c) 2010 လူသားအားလုံးအတွက်. All rights reserved. Powered by Blogger